Muuri News Network » SAWIRO: Somalida UK oo ku hor banaan baxay Safaarada Kenya ee LONDON
SAWIRO: Somalida UK oo ku hor banaan baxay Safaarada Kenya ee LONDON
Qaar ka mid ah Jaaliyadda Soomaaliyeed ee London ayaa Maanta Mudaaharaad ka hor-dhigay Safaaradda ay Kenya ku leedahay magaalada London, iyagoo dalbanaya in ciidamada Kenya ay ka baxaan Soomaaliya.
Dibadbaxayaasha oo tiradoodu ay kor u dhaafaysay 250-qof oo Haween iyo ilmo u badnaa ayaa ku eedeeyay Ciidamada Kenya ee Somalia ku sugan ay dhibaato ku hayaan Shacabka Soomaaliyeed, ayna duqeymo iyo barakacinta dadweynaha ka wadaan deegaanno ka tirsan Gobolka Gedo.
Boorarka ay wataan Mudaaharaadayaasha Soomaaliyeed ayaa waxaa ku Qoraa erayo ay ka mid ahaayeen; “Kenya Ciidamadeeda ha kala baxdo Somalia. Waayo ciidanka Kenya uma joogaan Somalia Nabad ee waxay u joogtaa Dagaal” iyo erayo kale.
Qaar ka mid ah dibad-baxayaasha oo u warramayay VOA-da ayaa sheegay in dibadbaxa ay dhigayaan uu yahay sidii si ay u muujin lahaayeen dhibaatooyinka ay Ciidamada Kenya ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku sugan deegaanno ku yaalla Koonfurta Soomaaliya.
Sidoo kale, Bannaan-baxayaasha ayaa waxaa ka mid ah Fannaaniin Soomaaliyeed, kuwaas oo kaalin weyn ku lahaa qaban-qaabada Dibad-baxaan ka dhanka ah Xukuumadda Kenya.